Qodobbada Salaadda ee Xoogan si loo soo nooleeyo Qaddarka Dhimatay | QODOBADA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda ee Xoogan si loo soo nooleeyo Qaddarka Dhimatay
Qodobbada Salaadda ee Xoogan si loo soo nooleeyo Qaddarka Dhimatay
Maanta, waxaan ku sii jiri doonnaa dhibco duco oo xoog leh si loo soo nooleeyo qaddarkii dhintay. Tilmaamaha salaadda si loo soo nooleeyo qaddarkii dhintay shaki la'aan waa mid ka mid ah salaadaha ugu muhiimsan ee qof walba ku tukado. Qaddarro badan ayaa lagu beddelay meeshii allabariga dembiga iyo sinada. Anshax xumada galmada ayaa ah habka ugu caansan ee cadowgu u yareeyo aayaha dadka. Dad badan ayaa aayahooda ku waayay nin iyo naag la yaab leh oo sariirta akhlaaqda ku suntan.
Sidoo kale, waxaa jira dad masiirkoodii laga adkaaday dembiga. Dad aad u tiro badan ayaa aayahoodii ku waayey habaarkii awoowayaashii iyo axdigii xumaa ee reerahooda xukuma. Si kasta oo uu cadowgu u maareeyo aayahaaga, warka wanaagsani waa in Eebbe yahay mid awood leh oo naxariis badan oo soo celin kara qaddarradaas. Ilaah waa kan dadka sameeyey. Isaga ayaa ku abuuray oo ku siiyay qaddarkaas. Sidaas darteed, wuxuu awood u leeyahay inuu ka soo nooleeyo qaddarkaas geerida.
Ilaah wuxuu waydiiyey Nebi Ezekiel, wiilkan laftiisu ma noolaan kartaa mar kale? Yexesqeel 37: 3-10 Markaasuu igu yidhi, Wiilka Aadamow, lafahanu ma noolaan karaan?
Sidaas daraaddeed waxaan ugu jawaabay, Rabbiyow, Ilaahow, waad taqaan. Oo haddana wuxuu igu yidhi, Lafahan u sheeg, oo waxaad ku tidhaahdaa, Lafahan engeganow, bal erayga Rabbiga maqla. Sayidka Rabbiga ahu wuxuu lafahan ku leeyahay, Hubaal waxaan ku gelin doonaa neef, oo waad noolaan doontaa. Oo waxaan kuu yeeli doonaa seed, oo hilib baan kuu yeeli doonaa, oo harag baan kaa dabooli doonaa, oo neef baan ku gelin doonaa, oo waad noolaan doontaa. Markaasaad ogaan doontaan inaan anigu Rabbiga ahay. Markaasaan wax u sii sheegay sidii laygu amray. oo intaan wax sii sheegayay ayaa waxaa jiray sanqadh, iyo lama filaan; lafihiina way isu yimaadeen, laf ilaa laf. Hubaal intii aan fiiriyey ayaa waxaa ku soo fuulay seedo iyo hilib, oo harag baa ku daboolay; laakiin neef ma lahayn. Oo weliba wuxuu igu yidhi, Wiilka Aadamow, neefta wax u sii sheeg, oo wax sii sheeg, oo waxaad neefta ku tidhaahdaa, Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Neefow, ka soo bax afarta dabaylood, oo ku neefso kuwa la laayay, si ay u noolow. ” Sidaas daraaddeed ayaan wax u sii sheegay sidii uu igu amray, oo neef baa iyagii soo gashay, wayna soo noolaadeen, oo waxay cagahooda ku istaageen ciidan aad u badan.
Ilaaheennu waa Ilaaha wax kasta oo suurtogal ah. Haddii uu soo noolayn karo lafo qalalan, runtii, in aayaha dhintay ama jiran la soo noolayn karo. Markay timaaddo dib -u -soo -celinta, waxaan Rabbiga ugu kalsoonaan karnaa taas. Sayidku wuxuu ku ballanqaaday kitaabka Yoo'eel 2: 25-26 KQA-Oo waxaan idiin soo celin doonaa sannadihii uu ayaxu cunay, dixirigii, iyo diirkii, iyo geedkii timirta ahaa, oo ahaa ciidankii weynaa oo aan idiin soo diray. Intaan maanta tukaneyno, waxaan ku amrayaa awoodda jannada; masiir kasta oo dhintay ayaa lagu soo noolayn doonaa magaca Ciise. Awoodda ku sara kiciyey Masiixa kuwii dhintay, waxaan ku amrayaa dib u soo celinta sannad kasta oo lumay magaca Ciise.
Awood kasta oo jinni oo xaday aayahayga ayaa maanta ku soo celisa magaca Ciise. Waayo, waa qoran tahay, amar baa nala siiyey. Magaca Ciise, jilib walba waa inuu sujuudo, carrab walbana waa qirayaa inuu Ilaah yahay. Dhammaan kuwiinna xada aayaha maqla erayga Rabbiga, ku soo celi aayahayga magaca Ciise.
Sayidow, qaddar kasta oo awoodaha jinnigu ku abtirsado ayaa hoos u dhacday. Qaddar kasta oo ay awoodihiisu ku maareeyeen aabbahay iyo hoyga hooyaday ayaa masiirkayga maanta ku sii daaya magaca Ciise.
Sayidow, si kasta oo masiirkeyga loo maareeyay, waxaan ku amrayaa dib u soo celinta guud magaca Ciise. Waayo, waxaa qoran, Waxaan soo celin doonaa sannadihii uu ayaxu cunay. Waxaan amar ku bixinayaa in sannad kasta oo lunsan lagu soo celiyo magaca Ciise.
Aabe Sayidow, harqood kasta oo jinni ah oo la saaray qaddarkayga oo ka miisaamaya inuu soo ifbaxo, harqoodkaas waa inuu maanta ku jebiyaa magaca Ciise. Harqoodkaas oo kale ayaan ku burburiyaa magaca Ciise. Waayo, waxaa qoran, subkidda, harqood kasta waa la dumin doonaa. Harqood kasta oo xun oo qaddar la miisaamay ayaa lagu burburiyey magaca Ciise.
Sayidow, mid kasta axdi xun oo saameynaya aayahayga, maanta waan kaa xoroobay magaca Ciise. Sayidow, habaar kasta oo jiil oo saameeya aayaha qof kasta oo ku abtirsada, waxaan ku baabi'iyaa habaarka noocaas ah magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ka baryayaa soo celinta wax kasta oo wanaagsan oo aan ku waayey magaca Ciise. Markii Rabbigu soo celiyey maxaabiistii Siyoon, waxaan la mid nahay kuwa riyooda. Sayidow, ammaantaydii iga luntay ayaa lagu soo celiyay magaca Ciise.
Aabbe Sayidow, waxaan ku baryayaa in qaddar kasta la toogtay falaarta geerida sinada darteed. Waxaan kaa baryayaa inaad maanta igu cafiso magaca Ciise. Waxaan amar ku bixiyay in aayahaygu nolosha maanta ku helo magaca Ciise.
Waxaan ka soo horjeedaa hadal kasta oo xun oo lagu sheegay aayahayga magaca Ciise. Waxaan jebiyaa carrab kasta oo shar ah oo ku tufay geerida aayahayga magaca Ciise. Qorniinku wuxuu leeyahay yaa hadla, oo waxay dhacdaa markii Ilaah uusan hadlin? Waxaan ku aamusay cod kasta oo shar ah oo ka dhan ah aayahayga magaca Ciise.
Sayidow, macaamil kasta oo shar leh oo sharaf leh, macaamil kasta oo xun oo qaddar ah, Rabbi waxaan ku amrayaa dib u soo celinta maanta magaca Ciise. Waxaad tahay Ilaaha suuragalnimada, mana jirto wax aan kuu suuroobayn inaad samayso. Sayidow, waxaan ku duceynayaa in meel kasta oo ay qaddarkeyga saameysay, waxaan ka baryayaa dayactir guud magaca Ciise.
Sayidow, nin kasta ama naag kasta oo qariib ah oo xaday aayahayga, waxaan amar ku bixinayaa in lagu soo celiyo magaca Ciise. Waxaan la hadlayaa hawada, dabaysha, iyo biyaha, magaca Ciise wuxuu ku tufaa qaddarkeyga ku qarsoonaa magaca Ciise.
Waxaan ka baryayaa xiriir rabbaani ah oo u dhexeeya caawiyaha aayahayga iyo aniga magaca Ciise.
article PreviousQodobbada Salaadda ee Ka Soo Horjeeda Indho La'aanta Wadnaha
Next articleQodobbada Salaadda ee ka soo horjeeda kacdoonnada maaliyadeed
10ka Aayadood ee Baybalka: ku saabsan iimaanka waqtiyada adag
70 Dhibcood oo Salaadda loogu talagalay Jannada Furan
20 Salaadda Ruuxiga ah ee Salaadda ee ka dhanka ah Guurka
20 Dhibcaha Salaadda Dagaallada ee Badbaadinta iyo Nabdoonaanta